အားပေးကွတဲ့ခဈြပရိသတျတှကွေောငျ့ ပြျောရှငျကွညျးနူးနရေတဲ့ မငျးသားခြောဘုနျးရှိနျခနျ့ – Cele Gabar
မွနျမာနိုငျငံရဲ့နာမညျကွီးရုပျသံလိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ MRTV-4 ရဲ့ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမငျးသားတဈလကျဖွဈတဲ့ ဘုနျးရှိနျခနျ့ကိုတော့သိကွမှာပါ။လကျရှိအခြိနျမှာပွသနတေဲ့ “နှလေယျညရဲ့လမငျး” ဇာတျလမျးတှဲမှာ အဓိကဇာတျဆောငျအဖွဈပါဝငျထားပါတယျ။ဘုနျးရှိနျခနျ့ဟာ “အခဈြသင်ျကတေ” ဇာတျလမျးမှာကတညျးကစပွီးတော့ ပါဝငျလာခဲ့သူတဈယောကျပါ။
လကျရှိပွသနတေဲ့ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး စီပှားရေးလုပျငနျးကိုဦးဆောငျနတေဲ့အပွငျ အရမျးခဈြတတျတဲ့ယောကျြားတဈယောကျအဖွဈလညျး သရုပျဆောငျတာတှရေ့ပါတယျ။ဇာတျရုပျတှတေိုငျးမှာအပိုအလိုမရှိ ပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျနိုငျသူတဈယောကျလို့လညျး သတျမှတျခံထားရသူပါ။
ဘုနျးရှိနျခနျ့ကို (၂၀၁၂)ခုနှဈကတညျးကအားပေးလာတဲ့ အမာခံပရိသတျကတော့ သရုပျဆောငျခကျြတှကေို သဘောကရြသလို ရငျ့ကကျြတဲ့စိတျနစေိတျထား၊အလုပျကွိုးစားမှုတှကေို အားကရြကွောငျးရေးသားခဲ့ပါတယျ။အခုလိုအမာခံပရိသတျတှကွေောငျ့ အနုပညာရှငျတှဟော အလုပျလုပျရတာပိုပွီးတော့အားရှိလာတယျလို့ဆိုရမှာပါ။အခုဆိုရငျလညျး အဲဒီလိုရေးသားခဲ့တဲ့ပရိသတျတဈယောကျရဲ့ပိုဈ့လေးကို သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချမှာပွနျပွီးတော့မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ရှလြေှ့ောကျပိုပွီးတော့အားပေးမယျဆိုတဲ့အကွောငျးကိုလညျးရေးသားထားပါတယျ။Cele Gabar ပရိသတျကွီးထဲမှာ ဘုနျးရှိနျခနျ့ကို အားပေးတဲ့သူတှရှေိလားနျော….
အားပေးကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြည်းနူးနေရတဲ့ မင်းသားချောဘုန်းရှိန်ခန့်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MRTV-4 ရဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းရှိန်ခန့်ကိုတော့သိကြမှာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာပြသနေတဲ့ “နွေလယ်ညရဲ့လမင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဘုန်းရှိန်ခန့်ဟာ “အချစ်သင်္ကေတ” ဇာတ်လမ်းမှာကတည်းကစပြီးတော့ ပါဝင်လာခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။လက်ရှိပြသနေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း စီပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့အပြင် အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ယောကျာ်းတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း သရုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဇာတ်ရုပ်တွေတိုင်းမှာအပိုအလိုမရှိ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်လို့လည်း သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။
ဘုန်းရှိန်ခန့်ကို (၂၀၁၂)ခုနှစ်ကတည်းကအားပေးလာတဲ့ အမာခံပရိသတ်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သဘောကျရသလို ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထား၊အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေကို အားကျရကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအမာခံပရိသတ်တွေကြောင့် အနုပညာရှင်တွေဟာ အလုပ်လုပ်ရတာပိုပြီးတော့အားရှိလာတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အခုဆိုရင်လည်း အဲဒီလိုရေးသားခဲ့တဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ပိုစ့်လေးကို သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာပြန်ပြီးတော့မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်ပိုပြီးတော့အားပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရေးသားထားပါတယ်။Cele Gabar ပရိသတ်ကြီးထဲမှာ ဘုန်းရှိန်ခန့်ကို အားပေးတဲ့သူတွေရှိလားနော်….
“ယောက်ျားလေးပုံစံနဲ့တွေ့မြင်ရတော့မယ့် ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း)”
“မွို့ကွီး(၄)မွို့မှာ ရိုကျကူးသှားမယျ့ နထေူးနိုငျရဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကား”